拉卡波吉耶：_usort_terms_by_ID waa 拉加萨雷 tan iyo版本4.7.0！ Isticmaal wp_list_sort（）哈尔基。古达哈 /home/218053.cloudwaysapps.com/wmdtwanpyt/public_html/wp-includes/functions.php 在线 4713
Haddii Internetku yahay hal shay，Waa Muuqaal.
Dadku waxay jecel yihiin si dhakhso ah oo sahlan oo loo heli karo macluumaad iyo jaantusyada ayaa muujinaya nooca xogta ee muuqaalkaas。 Xitaa Xogta Adag Waxay Sahlan Tahay in La Fahmo Marka La Isku Daro Jaantus，萨米尔·萨瓦里.
Marka la eego barta casriga ah ee Dugsiyada Sare ee Dukumiintiga，ilo-wareedku wuxuu awood u leeyahay inuu gaaro 15 milyan qof.
1.1 Faa’iido＃1- Soo-booqdayaasha Cusub
1.2 Faa’iido＃2-Hesho Soo-booqdayaasha
2 Maxaa Ka Dhigaya信息图表良好?
2.1 Dhismaha Macluumaadka
4.5 5. Falanqaynta IBM（印度卢戈古堡yaqaanay Indho Badan）
5 Aaladaha Darawaliinta ee Aaladaha Bilawga啊
6 Ka hor intaadan bilaabin：Baadhitaanka Infografiyaasha
7 Tusaalooyinka nolosha ee dhabta ah：Noocyada信息图
Suuq geynta，Bell Pottinger，wuxuu arkay 55％kordhinta miisaaniyada ganacsiga loogu talagalay walxaha dijitalka ah sida jaantusyada.
在lagu soo bandhigo macluumaad ku saabsan joornaalada中，伊斯卡daa wuxuu sheegayaa在地拉达dadka raadinaya macluumaadka xogtu ay arkeen inuu kordhay "800％" 拉巴迪sano ee la soo dhaafay。 Istaatistikada sidan oo Kale ah，way adagtahay in la diido in muuqaalka muuqaalka xogta qaab infographics uu yahay macaamil wanaagsan / suuqgeynta bogagga iyo blogyada.
Faa’iido＃1- Soo-booqdayaasha Cusub
拉丹塔·韦伯卡：Isticmaalayaasha Internetka ayaa laga yaabaa inay sameynayaan cilmi-baaris ku saabsan mawduuca aad ku jirtid。 Haddii aad tahay goobta kaliya ee aad haysatid faafin ku saabsan sababta蓝莓ay kuugu sahlanaato，ka dibna waxaad ka helaysaa gaadiidka qof kasta oo raadinaya mawduucan。 Kuwa raadinaya gaar ahaan sawirrada ayaa laga yaabaa inay ku soo gudbaan infographic aad iyo sidoo kale.
瓦尔巴欣塔·布尔沙达：Baadhitaanka Iskuullada Suuq-geynta Shakhsi在boosto dhaqameed y ku saabsan tahay中发布了75条推文，halka fayrasku ku dhowaado 600发了推文。 soo booqato booqashada cusub ee warbaahinta bulshada waa mid aad u weyn.
Nielson / Norman Group ayaa qiyaasaya在booqashada celceliska bogga uu socdo muddo daqiiqad啊。 Haddii aanad kantaroolin xiisaha akhristaha，waxay fiirin doontaa boggaaga oo和aad u guurto bogga xiga.
Soo booqdayaasha boggaga waxay ku jiraan caado-jaridda wargelinta iyo wararka。 Tani waa sabab kale oo ay jaangoyntu si fiican u shaqeeyaan si ay u qabtaan xiisaha akhristaha。 Muuqaal muuqaal啊oo muujinaya xaqiiqo xiiso leh ayaa ah sida ugu dhakhsaha badan ee loo soo bandhigo macluumaadka ka badan cutubyada qoraalka。 Akhriyeyaashu waxay sahlanaan karaan infakshankaaga si deg-deg ah，waxay soo qaataan macluumaadka loo baahan yahay waxayna joogi doonaan muddo dheer si ay u hubiyaan waxa kale ee aad u baahantahay aa aaa soatataaaa aaa soa bandaigaaa，aaa soa bandaiga，.
Caqabada farsamada ee ade adeega adeegga qaniisyada hodanka ah
Si kastaba ha ahaatee，arrin kale oo maskaxda lagu hayo waa in in a ay muuqato sawirada qiimaha，sawirada culus ee waqti dheer qaadaya inay u adeegaan inay marti galiyaan。 Cilmi-baaris和samaysay，Pew Internet ayaa sheegaysa在celceliska goobta booqashadu uu filayo bog ah在ay ku soo galaan sadex ilbidhiqsi中。 Si deg deg ah goobta aad u socotaa，si aad u wanaagsan ayaa loo beddelayaa.
Wago ficil isku dheelitiran si loo hubiyo in goobtaada ay bixiso waayo-aragnimo hodan ah oo hodan ah iyada oo a weli sii socoto iftiin degdeg ah。 Habka ugu fiican ee lagu dhameyn karo waa iyada oo la adeegsanayo soodhaweyn degdeg ah iyo sawirro la filayo。 Waxaad ogaan doontaa annaga dib u eegista websaydhka，waxaan xoogga saari doonaa xawaaraha iyo inaan sameyno baaritaano badan oo xawaareyn ah markaan qiimeyno martigeliyaha webka.
Tani waa ficil isu dheellitiran si loo hubiyo in goobtaada ay bixiso khibrad hodan ah oo muuqaal leh iyadoo a wali u shidan tahay hillaac dhakhso leh。 Sida ugu wanaagsan ee tan lagu dhammayn karo waa iyada oo la adeegsado deg deg degyo websaydhada martigelinta iyo sawirrada la hagaajiyay。 Waxaad ogaan doontaa inaan si aad ah ugu xoojinay xawaaraha dib u eegistayada martigelinta-eeg Dib u eegida A2 tusaale ahaan ama hubi dib u eegistayada kale si loo arko websaydhka ugu habboon ee buuxinawa.
50％Maskaxdayada Waxay Ku Lug Leedahay Howsha Aragtida（Ilo）.
达卡·图纳达（dadka inoda） NeoMam ayaa cilmi baadhis ka samaysay ilaha sida Google趋势，Nielson iyo Pearson oo soo jeedinaya 70 boqolkiiba dareenka dareemayaasha dareemayaasha ah ee ku yaal indhaha iyo dadka waxay kuuaaa uae au aa yaaa aa alaq.
Dadku waxay rumaysan yihiin waxa ay arkeen sababtoo ah way fahmaan。 Sameynta cilmi-baaris iyo ku-taageeridda boggaaga ayaa ku dari kara awooddaada astaan​​taada。 U hubso inaad：
西提拉古布·阿达格（Sii tirakoob adag）
Markaad isku darka aragtida muuqaalka leh ee muuqaalada isdhexgalka，sida Nogeeynta NeoMam ee tirakoobyadani waxay ka yimaadeen，maahan kaliya inaad qabatid xiisaha akhristaha laakiin adigu waad ku mash.
Maxaad u aragtaa蜡巴丹？ Miyaad ku aragtay garaaf cad cad cad bogga ama midkale oo guurta，dareema ama laga yaabee inuu bilaabo video?
Maxaa Ka Dhigaya信息图表良好?
Horey u socoshada，waxaanu raadin doonaa qaar ka mid ah khayraadka iyo qalabka ugu wanaagsan ee waxqabadka xogta maanta。 Wadh dhib ah maahan inaad tahay boogo caadi ah oo raba inuu abuuro qaar ka mid ah jilayaasha quruxda badan ee loogu talagalay ujeedooyinka ujeedada ama naqshadeeyaha garaafu xirfadlaha ee u heeraerhanaahan Waan Hubaa inaad ka heli doonto boostadan faa’iido leh.
Guud ahaan，sawir wanaagsan oo muuqaal ah wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo waaweyn：
Macluumaad macno leh,
Naqshadeynta macluumaadka saxda ah，伊予
Maskaxda ku hay in inkastoo jaantusyada iyo jaantusyada ay u muuqdaan inay soo jiitaan dareenka blogsphere iyo isticmaalayaasha warbaahinta bulshada; Waa inay sameeyaan蜡ka badan kobcinta shakiga ah-信息图iyo jaantusyada waxay u maleynayaan in ay keenaan xogta caajis iyo naxdinta leh hab fudud oo saaxiibtinimo ee meesha ugu horeysa.
Sidaa darteed，ka hor abuurista garaaf ama wax-qabad，waxaad u baahan doontaa 1）Abaabul，shaandheyn，iyo hannaanka xogtaada； 2）Go’aanso sida loo soo bandhigo xogtaada（又名naqshadaha naqshadaha xogta）.
Geli OpenRefine-Qalab macluumaad macquul啊ootartar leh oo naga keydisa in aa abaabulno xariiqteena macluumaadka oo aynu ku qorno Excel工作表。 Hore ee loo yaqaan Google Refine（iyo Freebase Gridworks），qalabkani wuxuu ka caawiyaa dadka istmaala inay sahamiyaan oo nadiifiyaan xogta，is-beddelidda xogta hal qaab oo kale，wassayna ku-fidiyawan du adeegyo kala.
Haddii aad la shaqeyneysid qaar ka mid ah xogaha aan kor ku soo sheegnay，OpenRefine waa hubaal waa in haystaan​​ qalabkaaga。 Qalabka Waxaa hadda lagu martigeliyay GitHub，waad awoodi kartaa booqo boggan ee loogu talagalay dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah iyo caawinta Wixii faahfaahin dheeri ah iyo wararkaa aka agaaales aa aka ea aga ales aka akabeesale，
Markaad diyaar u ahaato xogtaada，Waa waqtigii la go’aansan lahaa sidaad ugu soo bandhigi laheyd daawadayaasha.
Waxaa jira habab aan tiro lahayn oo lagu sameyn karo tan：shaxda，jaantuska，garaafka xariiqda，直方图，khariidada kulaylka，shaxda socodka，miisaanka wakhtiga，iyo wax la mid ah。 Mid kasta oo ka mid ah hababyadan waxay ku haboon yihiin noocyada xogta qaarkood（oo si xun u dhaqdhaqaaqa haddii si khalad ah loo isticmaalo）.
Sidee u soo bandhigi kartaa xogtaada，si aad u tiraahdo statistic waa qurux，indho qabasho，iyo sahlan in la fahmo?
Xasuuso in miisaanka wakhtiyadu uu soo bandhigo tiro tusaalooyin xiiso leh markaad u rogto jiirkaada，markaa hubi inaad u aragto miiska dhabta ah ee goobta.
Haddii aad raadineysay habab aan caadi ahayn，Markaa waa inaad hubisaa maqaalkan cajiibka ah在Maqaarka杂志上。 Boostada ayaa la daabacaa wakhti ka hor laakiin weli，Waxaan u arkaa inay蜡塔巴丹tahay.
Sida ugu dhaqsaha badan markii lagu dhammeeyo naqshadda dhismaha，waa waqtigii wax soo saar dhab ah。 Ka sameynta shax muuqaal wanaagsan oo ka sameysan xogta ceeriin marna ma ahan howl sahlan，nasiib wanaag waxaa jira aalado tira badan oo shaqada lagu qabto.
哈哈，蒂罗因（tirooyin）蒂罗（tiro aan）蒂拉杜都（tiradoodu）艾恩（ahayn）或卢古（loogu talogalay）萨米尔-加迪达（sadir-qaadidda）。 Waxaa jira qalab dhamaystiran oo soo saaraya garaafyada isdhexgalka oo ka baxsan xogta adag; Waxaa jira sidoo羽衣甘蓝codsiyada shabakada fudud ee aan waxba samayn karin，laakiin waxay abuurayaan garaafyada khadadka fudud ee 2轴.
Sababta dhabta ah，waxaanu dooneynaa inaanu eegno labada迪纳克岛isla markaana aan ku qorno qalabka garaafyada badan ee horay loo isticmaalo iyo kuwa isticmaala.
R waa luuqad kombuyuutar iyo limbi loogu talagalay maareynta xogta，xisaabinta iyo muujinta muuqaalka。 ggplot2，dhanka kale，waa nidaam sawir leh oo R ka caawiya soo saarida garaafyada muraayadaha badan ee adag。 HeatMap kor，tusaale ahaan，waxaa la dhisay iyadoo la isticmaalayo ggplot2 iyo R.
Haddii aad xiiseyneyso barashada R iyo ggplot2，Baro barashada waa blog weyn oo loogu talagalay akhrinta dheeraadka ah（inkastoo blogka aan la cusbooneysiin in muddo ah）.
JP Graph waa aalad khaanadda PHP wadata oo taageera noocyada khiyaanooyinka kala duwan。 Haddii ay dhacdo inaad qoreyso barnaamijka PHP ee u baahan jaantus abuurka maktabad，tani waa蜡ay tahay inaad fiiriso。 Ma dhihi lahaa JP Graph Waa aalad sahlan oo loo looaga talagalay bilaabayaasha laakiin aaladda（ama，maktabadda PHP）aad ayey kuu caawinaysaa markaad ubaahantahay inaad ka soo saarto garaafyo iyo jaantdayo shab。 JP Graph Waa u bilaash isticmaalka aan ganacsiga ahayn waxaad u baahan tahay websaydh taageeraya PHP 4.3.x ama wixii ka sareeya.
5. Falanqaynta IBM（印度卢戈古堡yaqaanay Indho Badan）
Waxay马蒂 – galisay macaamiisha IBM，Indho巴丹ayaa KA巴丹蜡-KA-fiirinta xogta – waxayüoggolaaneysaa dadka isticmaala inay洙dejiyaan macluumaadkooda gaarka啊伊予sidoo羽衣甘蓝洙saaraan qaab cusub OO muuqaal啊OO区salaysan XOG kasta OO拉古keydiyay serverka.
Google Chart Waa bilaash，awood，dabacsanaan，waxanaana lagu taageeraa qalab badan oo horumarineed.
Calaamadaha Google Chart Waxaa si cad loogu saleynayaa tiknoolajiyada HTML5 / SVG; qalabku wuxuu ka caawiyaa samaynta jaantusyada qaabab卡拉duwan leh动画qurux badan iyo xakameyn是dhexgal.
Axiis waa qaab istiraatiijiyadeed oo muuqaal ah oo muuqaal ah oo a sameeyeen Tom Gonzalez iyo Michael VanDaniker。 Qalabka waxaa si gaar ah loogu talagalay bilowga iyo khibradaha khibrad leh。 Axiis wuxuu bixiyaa qaybaha horay u dhiska ee horay loo dhisay iyo sidoo kale qaababka qaabaynta qaababka iyo qaababka wax dhigista kuwaas oo kuu oggolaanaya inaad abuurto muuqaalkaaga gaarka.
Aaladaha Darawaliinta ee Aaladaha Bilawga啊
Sida cad博客作者badankood（naftayda la mid ah）uma baahnid qalab dhamaystiran oo wax ku ool ah oo ku saabsan hawlgalkooda caadiga ah ee博客。 Inta badan，dhammaanba waxaan u baahannahay waa codsiga shabakada sahlan ama qalab sahlan si loo helo shaqo si dhakhso ah.
Iyadoo la sheegayo，halkan waa liiska qalabka abuurista oo u baahan dadaal蜡-barasho oo aad u yar iyo user-ka saaxiibtinimo.
Visme waa mashruuc DIY ah kaas oo u oggolaanaya dadka istmaala inay soo bandhigaan bandhigyo xirfad iyo jaangoyn.
在ka badan shakhsiyaadka 350,000 iyo ururada（oo ay ku jiraan kuwa isticmaala shirkadaha waaweyn sida IBM iyo Disney）Waxay isticmaalaan qalabka si y ula xiriiraan si ka wanaagsan iyada oo la adeegsanayo shagyanka.
Wareegga waa aalad muuqaal adeegsade ah oo saaxiibtinimo-saaxiibtinimo ah oo sir jirtay ilaa 2011。.
Easel.ly waxay ka caawisaa abuurista iyo wadaagida macluumaadka muuqaalka si sahlan onlineka。 Barnaamijka webka wuxuu ku yimaadaa shabakad sahlan oo leh qaar ka mid ah qaababka hore iyo jadwalaha soo jiidashada。 Inkasta oo Easel.ly ay wali tahay habka beta，hase yeeshee waxay horey u leedahay in ka badan 130,000位用户-服务器上的abuuray muuqaalada啊.
Vizualize.me waxay kaa caawineysaa abuuritaanka macluumaad khafiif ah oo oo saabsan shaqsiyaadka（haa，halkan magaca Vizualize Me）。 Waa qalab xiiso leh oo lagu a g ciyaaro oo waxay ku abuuri kartaa简历qurux badan ama astaan​​ muuqaal ah dhawr dhagsiyood gudahood。 Haddii ay dhacdo inaad ku jirtid’LinkedIn’，Waa inaad runtii isku daydaa tan-qalabku wuxuu awood u leeyahay inuu ku xiro boggaaga guud ee’LinkedIn’wuxuuna abuuraa sawirro cajiib leh oota sale.
Ma u baahan tahay sameys-qore fudud吗？ Kadibna Hohli waa meel lagu booqdo。 Codsiyada Websaydkani waxay taageertaa noocyada kala duwan ee jaantusyada laba iyo toban kala duwan oo kala duwan-dhammaan dadka istmaala waxay u baahan yihiin inay tagaan waa furaha xogta iyo faahfaahahinta naqshadeyn.
Piktochart waa qalab ku salaysan qaab-dhismeed oo ka caawinaya kuwa aan naqshadeeynin inay abuuraan muuqaalo qurux iyo jaantus.
Qalabka wuxuu taageersan yahay sifooyinka jiidista iyo soo-jiidashada waxayna bixisaa dooro ballaaran oo ku jira shaxdooyinka horay loo yaqaan，图标，矢量，iyo图像。 Haddii aad raadineysid qalab sahlan oo muujinaysa kharashka yar ee adeegga，Piktochart waa hubaal mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan.
Ka hor intaadan bilaabin：Baadhitaanka Infografiyaasha
Miyaad diyaar u tahay inaad abuurto qaar ka mid ah joornaaladaada gaarka啊？ ug Weli Wax Badan ayaan Haysanaa Halkan.
Waan Hubaa in aad aragtay qaar ka mid ah shabakadaha warbaahinta bulshada ee hore-tair oo caddaynaysa in sawirrada quruxda badan leh ulaha xogta macnaha leh!
西多（Sidoo）羽衣甘蓝，蜡梅，锡拉萨巴博（Asa u a so u galaan magaalooyinka）.
Markaan Tixraacno Shaqooyinka dadka羽衣甘蓝，Waxanan Baran Karnaa Waxa Sifiican Ug Shaqeeya dhagaystayaasha.
Tusaalooyinka nolosha ee dhabta ah：Noocyada信息图
Isha laga soo xigtay：哇，现在哇
Waxaa laga soo xigtey：阿法尔广场
Waxaan ku baddalay daraasiin blogyo xiiso leh iyo网站-yo la xiriira mawduucdayada markii a sameynay cilmi-baariskan。达卜·阿哈恩（Dhab ahaan），蜡wax吉拉·蜡wax（yabaraabo badan）oo loo akhriyo oo蜡巴托（barto oo）或lala ciyaaro！ Marnaba ma ogi inay jirto xog badan oo la heli karo si xor ah Gap Minder iyo Xaqiiqda Aduunka ee Fiican; Waxaan wax badan akhriyay boggaga internetka /博客sida UX Booth（ma aha mid gebi ahaan la xidhiidha muuqaalka xogta，laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo faa’iido leh oo ku saabsan sida aragtyana loo wanajina用户， Macluumaadka daadka; iyo waxaan si qoto dheer u bogayaa dhammaan shaqooyinka la yaabka leh ee lagu soo bandhigay Gudiga’Pinterest’ee Pinterest iyo Chart Porn.
Haddii aad kaliya ka bilawdo muuqaalka xogta，waxanan aad uugu talinaynaa inaad booqato goobaha iyo blogyada kor ku xusan.
Haddii Aadan Haysan Awoodda Xogta Muuqaalka ee ololaha suuq-geyntaada，哈达·瓦阿·瓦赫蒂吉·拉·比拉比·拉哈.
La qaboojiyay: _gebruik_terms_by_ID waa laga saaray tan iyo weergawe 4.7.0! Isticmaal wp_list_sort () halkii.
La qaboojiyay: _usort_terms_by_ID waa laga saaray تان iyo الإصدار 4.7.0! Isticmaal wp_list_sort () halkii.
La qaboojiyay: _usort_terms_by_ID waa laga saaray tan iyo versiyası 4.7.0! İstiqmaal wp_list_sort () halkii.